Mareykanka”Waxaan qaarijinay 27 Al-shabaab kamid ah” | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Mareykanka”Waxaan qaarijinay 27 Al-shabaab kamid ah”
Muqdisho (SNTV)- War ay soo saartay Dowladda Mareykanka ayaa lagu faah faahiyay duqeymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab oo ciidamada Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya,iyagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya.
Afrika ee AFRICOM oo ah Taliska guud ee ciidamada Mareykanka oo ku sugan Qaaradda Afrika ayaa shaaciyay in weerarka oo dhacay labadii June lagu dilay 27 kamid ah kooxaha argagixisada Alshabaab,kaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsna Gobolka Bari ee Puntland.
Duqeymahaasi ayaa ka dhacay deegaan qayaas ahaantii in kabadan 25 miles u jira magaalo xeebeedka Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari,gaar ahaan dhinaca Koonfureed.
AFRICOM waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan inay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah, si loo ilaaliyo danaha dadka Mareykanka, loona baabi’iyo argagixsada.
Previous articleKaxda oo ku biirtay degmooyinka ku haray wareegga 2-aad ee tartan aqooneedka
Next articleMaleeshiyada Shabaab oo qasaare xoogan lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay Gedo